War Deg Deg ah : Ahlu Sunna oo Shir Maamul U Sameyn Kaga Dhawaaqay Dhuusamareeb – Goobjoog News
Maamulka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee dhawaan la wareegey gacan ku heynta magaalada Dhuusamareeb ayaa ku dhawaaqay in halkaasi ay ka fidiyeen shir maamul loogu sameynayo gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, sii hayaha guddoomiyaha guddiga fulinta ee Ahlu Sunna ayaa isu imaatin ka dhacay Dhuusamareeb ka sheegey in ay fidiyeen gogosha shirka, oo lagu sameynayo maamul gobolada Mudug iyo Galgaduud.
“Ujeedada iyo hadafka laga leeyahay kulankani waxa weeye maadaamaa horey ay u fidsaneyd gogoshii ay horey u fidisey maamulka Ahlu Sunna Wal Jamaaca taas oo maamul loogu sameynayo gobolada Mudug iyo Galgaduud, hakadna uu horey ugu yimid, mudadii hakadka ahayd in dardar la galiyo, ee miro dhalkeedii loo gudbo, ujeedada kulankani waa intaasi kaliya” ayuu yiri Sheekh Maxamed Shaakir.
Go’aankani kasoo baxay Ahlu Sunna ayaa imanaya xili maanta magaalada Cadaado lagu dhaariyey xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ee halkaasi muddo loo fadhiyey dhismaheeda, iyada oo lagu wado in 2 todobaad gudahood lagu doorto madaxweyne.
Dhuusamareeb ayaa ah caasimadda maamulka Galmudug sida ku qoran dastuurka maamulkani ee dhawaanta la ansixiyey.
Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug oo Xilka Loo Dhaariyey
Prof. Jawaari “Maamulka Galmudug Waxaa Lagu Warshadeeyey Soomaaliya”
Nabadoonkii Labaad Oo Todobaad Gudahiisa Lagu Dilay Magaalada Baladweyne